MEDIA & PR Kpọtụrụ
Wondershare Reseller Mmemme enyere anyị resellers na-eme ka elu uru site na-ere Wondershare ngwaahịa na iji ha onwe ha ahịa ọwa na obodo ahịa.
Anyị nwere mmasị na-ekesa anyị software site resellers lekwasịrị anya kpọmkwem mba ma ọ bụ mpaghara. N'ihi na anyị na-eche ọ bụla ahịa na ọ bụla azụmahịa na-achọ onye obibia, anyị kpebiri ka ịgbanwee n'ime onye mkparita uka kama n'ịtọgbọ ofu okwu. Sales mpịakọta na nkwa ime iji kwalite Wondershare bụ isi ihe na-ekpebi mmekọrịta.
Wondershare Enye a sara mbara nke ohere maka nkesa mmekọ izute kpọmkwem ahịa mkpa nke ọ bụla ahịa.
Ịkọrọ anyị na-eto eto ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ
Anyị OEM mmekọ bụ ngwaike / software mgbere ma ọ bụ ikwu oru na enye ọrụ na embed Wondershare teknụzụ na ha na ngwaahịa ịgbakwunye ụkpụrụ ka ha na ngwaahịa na mụbaa ha ahịa.
Manufacturers nke ngwaike ngwaahịa (dị ka dijitalụ ese foto, mobile ngwaọrụ, desktọọpụ kọmputa, sava na na) ike na-enye ndị ahịa ha ihe enwekwukwa ngwọta na-amụba ha n'akụkụ peeji site tụnyere Wondershare teknụzụ na-anapụta ndị jikọtara ùkwù.
Independent software mgbere nwere ike mfe iwekota a Wondershare ngwaahịa ha ẹdude ngwaahịa portfolios. The enwekwukwa omume na-emepụta a elu uru ngwaahịa, na-amụba ịrịba ọzọ revenue ohere na decreasing egwu asọmpi.
Ọrụ na-eweta mmekọ
Wondershare Enye a nso nke ngwaahịa na-ekwe ka PHPs, ASPs na ndị ọzọ na jisiri enye ọrụ inyere ha aka inwe ihe ahịa site na àjà online ọrụ.
Ntak-aghọ ihe OEM onye nke Wondershare?
Anyị ọkachamara OEM onye nkwado otu na-enye gị na consultancy na ọrụ na-ọma iwekota anyị teknụzụ iji hụ ahịa afọ ojuju.
Lekwasịrị anya kpamkpam na-egbo mkpa nke azụmahịa ahịa. Wondershare Nweela na ntụkwasị obi nke nde mmadụ 35 azụmahịa ọrụ na over150 mba.
Wondershare Natara dị iche iche awards anyị magburu onwe ngwaahịa arụmọrụ, akpa-larịị ọrụ na ya kpamkpam adware-free, nke bụ nnukwu uru n'elu anyị asọmpi.
Welcome to Wondershare Mgbakwunye Mmemme! Isonyere anyị omume ugbu a na-eme ka $3.000 kwa izu! Anyị omume na-enye a-eri-irè ịgakwuru maka website nwe n'ịwa ọzọ ego enweghị ihe ọ bụla efu! Ndụ dị ka a Wondershare Mgbakwunye dị mfe na-atọ ụtọ! Olee ebe ọzọ ị ga-enweta dịkarịa ala 10 top n'ire software na ngwaahịa na fọrọ nke nta n'ahịa onwe ha na irite ụlọ ọrụ na-eduga commissions?
Ị nwere ike họrọ gị Mgbakwunye netwọk n'okpuru nwere ike pịa "Gaa" na ịchọ "Wondershare" ke n'elu ikpo okwu, gị na-eme ga-mma ozugbo site anyị Mgbakwunye faili.
Ịghọta ohere i nwere ike mgbe ka na-aga taa!
N'ihi na ajụjụ ndị ọzọ, biko egbula akpọtụrụ anyị: Mgbakwunye # wondershare.com (dochie # na @)
Anyị Mgbakwunye N'uba | Na-ekwe nkwa ma ikike gị & uru na nke anyị, biko pịa mara Wondershare Mgbakwunye iwu.
Ajụjụ niile na-ekwu na-nnọọ
Thest ikpe ọmụmụ bụ eziokwu akụkọ, showcasing ụfọdụ n'ime Wondershare azụmahịa mmekọahụ omume na guzosie ike ụlọ ọrụ na a n'ọtụtụ zuru ụwa ọnụ.
Ọnwa atọ mgbe zuo nke QuizCreator na Quiz Management System, na e nwere 2461 trainees na dechara nnwale. 26 nnwale na TRG n'ikedo Standards Ule e mepụtara bipụtara na Quiz Management System ọma ruo online ule. Ha belatara oge maka N'ezie mmepe na nnyefe pụtara mgbe zọpụta a nnukwu ego na ọzụzụ.
Ọtụtụ puku ndị ọrụ onwere a ìgwè nke ọzụzụ azụmahịa, ọha na onwe ụlọ akwụkwọ, ọkachamara azụmahịa, IT ụlọ ọrụ, ọchịchị na na na-eji Wondershare QuizCreator dị ka àgwà online ntule ngwọta maka anapụta ọzụzụ na-emepe emepe na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-amụ arụmọrụ ugbu kpukpru usen-eri na shortening ọzụzụ oge . Na obi dị anyị ụtọ na-akpọ aha a ụwa na-mara ụlọ ọrụ n'etiti ha ebe a maka na-ekere òkè ahụmahụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe omenala enterprise ngwọta maka gị ụlọ ọrụ na Wondershare QuizCreator na Quiz Management System, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.